Learning Archives - A Programmer
ဒီတစ်ပတ်တော့ OOP series ခဏနားပြီးတော့ bad programming habits ဆိုတဲ့ programming လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ မထားသင့်တဲ့၊ ဖျောက်သင့်တဲ့ bad habits တွေအကြောင်းကိုရေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဟာတွေကလည်း ကိုယ်တွေ့ပေါ့လေ :3။ ဘာလို့ ဒီအကြောင်းရေးရတာလဲဆိုတော့ ပုံမှန်ဆို ရုံသွားရုံးတတ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန် အချိန်ပိုကသိပ်မထွက်ဘူး၊ အခုလို remote working လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ မိမိအတွက် အချိန်ပိုတွေထွက်အောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိုတိုးတတ်အောင် လုပ်ဖို့အချိန်တွေရပါတယ်။ အခုပြောမယ့်အထဲက bad habits တစ်ချို့ကိုယ့်မှာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရတာပေါ့။ Official Documentation ကိုမဖတ်ဖြစ်တာ နည်းပညာတစ်ခုခုလေ့လာပြီဆို အဲ့ဒီနည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့…
A Programmer,2weeks ago02 min read
Learning, Soft Skill
တစ်ခါတစ်လေကျဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိအောင် ပျင်းနေတာလိုလို motivation ပဲပျောက်နေတာလိုလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ကလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ tasks တွေ deadlines တွေရှိပါတယ်။ မလုပ်ချင်လဲ လုပ်နေရတဲ့ အချိန်တွေရှိတတ်ပေမယ့် အဲ့လိုအချိန်တွေမှာ productive ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ ကျနော် ဘယ်လို productive ဖြစ်အောင်လုပ်နေလဲ ဆိုတဲ့ အချက်တစ်ချို့ကို ဒီနေ့ရေးပေးမှာပါ။ Motivation ရှိမှ code ရေးလို့ရတာသေချာလား ? (Live without your soul sometimes) Motivation မရှိဘဲ code ရေးနိုင်ဖို့ motivation ကိုအရင်ဖယ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ Problem solved :3. မိမိရဲ့…
A Programmer,2months ago22 min read
Programming လေ့လာနေပြီး ခရီးမတွင်တဲ့ သူတွေကိုလည်း အမြဲလိုလို ကျနော်တွေ့ရတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာ programming လေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာ ဆောင်ရန်ထက် ရှောင်ရန်လေးတွေကို ရေးပေးသွားပါမယ်။ မိမိလေ့လာနေတဲ့ အရာကို မကွဲပြားခြင်း ပထမဆုံး အရေးကြီးတဲ့ အချက်က ကိုယ်ဘာလေ့လာမလဲဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြား သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်က JS လေ့လာနေတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ focus က JS မှာပဲ ရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ JS လေ့လာနေလို့ မပျက်သေးဘဲနဲ့ တစ်ခြားသော ဟိုယောင် ဒီယောင်ဖြစ်မယ်ဆိုလည်း progress ရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခုလက်ရှိမှာ မြင်နေတွေ့နေရတာက ဘာလဲဆိုတော့ အကုန်လုံးကို လိုက်လေ့လာနေကြတာပါ။…
A Programmer,2months ago51 min read
Programmer တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ နည်းပညာအသစ်အသစ်တွေ လေ့လာနေရမှာက မိမိရဲ့ career progression အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလိုဖြစ်လာပါပြီ။ ကျနော်ဒီနေ့ နည်းပညာအသစ်တစ်ခုလေ့လာတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လို အချက်လေးတွေ သိထားရင် learning လုပ်ရတဲ့ နေရာမှာ အချိန်တိုတိုနဲ့ efficiency ကောင်းကောင်းလေ့လာနိုင်မယ်ဆိုတာ ရေးပေးသွားပါမယ်။ An Effective Learning Kit ဒီအချက်ကတော့ ကျနော်လက်ရှိအထိလုပ်နေတဲ့ ပုံစံတစ်ခုပါ။ ကိုယ် တစ်ခုခုလေ့လာပြီဆိုရင် (ဘာပဲလေ့လာလေ့လာ) အရင်ဆုံး data လိုက်စုတတ်တဲ့ အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်။ အသုံးဝင်လောက်မယ့် tutorial links တွေ၊ download ချထားတဲ့ course တွေ၊ ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီး ရေးထားတဲ့ notes…
A Programmer,4months ago 12min read
ဘယ်နည်းပညာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် လေ့လာပြီးပြီဆို လက်တွေ့ပြန်လည် အသုံးချကြည့်ဖို့လိုပါတယ်၊ Apply ပြန်လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့၊ ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်လည်း ဆိုတာကို ကျနော် ဒီနေ့ ရေးသွားပါမယ်။ ကျနော် problem တစ်ခုကို အမြဲကြားဖူးတယ်၊ ဘာလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ကတော့ React လေ့လာနေတယ် အကိုရေ၊ ထင်သလောက်လမ်းမပေါက်လာဘူး၊ ကျွမ်းကျင်လာမှုလည်းမရှိသလိုပဲ၊ အဓိက ဒီ issue ရဲ့ဖြေရှင်းရမယ်ဆို ပထမဆုံး စနစ်ကျကျအရင်လေ့လာမှု လိုအပ်ပါတယ်၊ Trustful ဖြစ်တဲ့ resources ကောင်းကောင်းတွေဆီကနေ လေ့လာမယ်၊ နောက်ထပ် အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုက လေ့လာပြီးတာနဲ့ ကိုယ်လေ့လာခဲ့တဲ့အရာတွေကို ပြန်လည်အသုံးချကြည့်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ရပါတယ်။ မှန်ပါတယ်၊ project တွေစမ်းရေးကြည့်ပါ၊ ToDo…
A Programmer,6months ago 1 1 min read
စကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကိုယ်သိထားတဲ့အရာကို လက်တွေ့မှာ တစ်ကယ်အသုံးမချနိုင်ရင် အဲ့ဒီ အသိက အလကားပဲတဲ့။ ဥပမာ အနေနဲ့ ထပ်ပေးရင် ရေကန်တစ်ခုမှာရှိတဲ့ ရေအတိမ်အနက်ကို ကြည့်ရုံနဲ့ မသိနိုင်ပါဘူး၊ ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြည့်မှ အတိမ်အနက်ကို သိလိမ့်မယ်၊ သိတဲ့အပြင် ရေထဲမှာ ဘယ်လို survive လုပ်ရလဲဆိုတာ တစ်ဖြည်းဖြည်း တတ်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ programming မှာလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ၊ ကျနော်တို့ သင်ယူထားတဲ့ အရာတွေကို လက်တွေ့အနေနဲ့ တည်ဆောက်နိုင်မှသာ တစ်ကယ်တတ်မြောက်မှာပါ။ ကျနော်ဒီလိုပြောလိုက်လို့ practical က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဗျ။ ပြောရရင် practical က ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုပါစို့။ Universities တွေမှာ…
A Programmer, 12 months ago01 min read
ကျနော် ဒီနေ့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ နဲ့ ဘယ် programming ကိုမဆို သင်ယူလို့ရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် သုံးနေတဲ့ နည်းလမ်းတွေကော သဘောကျတဲ့ နည်းတွေကော စုပြီး ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလို learn လုပ်ဖို့ က senior တွေမှရယ် ၊ ဘယ်သူတွေမှရယ် လုပ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ အားလုံးလုပ်နိုင်တဲ့ အရာပါ၊ တစ်ကယ်လိုအပ်နေတာက သင့်တော်တဲ့ resources တွေနဲ့ techniques တွေပါ။ အခြေခံကို အရင်နားလည်အောင်လုပ်ပါ။ Programming တစ်ခုကိုစပြီးတော့ မသင်ခင်မှာ programming တစ်ခုဟာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာ basic understanding…
A Programmer, 12 months ago02 min read
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် တွေက ကျနော် begineer programmer တွေအတွက် အသားပေးပြီး content တွေရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တွေက ရေးခဲ့တဲ့ beginner တွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့် ကောင်းနိုးရာရာ Post တွေကို ပြန်လည် Recap လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 1.Programming လောကထဲသို့ ခြေလှမ်းအစ (သို့) programmer တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဒီ article ကတော့ ကျောင်းပြီးခါစ လူတွေ၊ programming ကိုစိတ်ဝင်စားပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမလဲစဉ်းစားနေတဲ့လူတွေအတွက်ပါ။ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=788957584793621&id=100010381592688 2. A General Approach Of Learning Programming (Programming…
A Programmer, 12 months ago 1 1 min read
How to beaquick learner , How to learn programming faster သင်လွယ်၊ တတ်လွယ် ဖြစ်ချင်တယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ Hello ကျနော်ဒီနေ့တော့ Learning technique တွေကို sharing လုပ်သွားမှာပါ၊ ကိုယ့်ရဲ့ learning journey ကို speed up ဖြစ်ပြီးတော့ quick learner တွေဖြစ်နိုင်တဲ့ technique တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ programming ကိုအခုမှစမယ့်လူတွေ၊ Language ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲရှိနေသူတွေ ကျနော်ရေးထားတဲ့ အောက်က content တွေဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ Programming လောကထဲသို့…
programmer ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ နေရာမှာ tech skill တွေတင်မကဘဲနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ attitude နဲ့ mind set ဟာလဲအရေးပါပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် soft skill & hard skill နှစ်ခုလုံးပြည့်စုံနေဖို့လိုပါတယ်။ ဒီ article မှာတော့ hard skill လို့ ခေါ်တဲ့IT skill သက်သက်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ soft skills (working life style, communication, attitude.etc) စတာတွေကိုပါရေးသွားမှာပါ။ Positive Attitude (အကောင်းဘက်ကမျှတပြီးမြင်ပေးနိုင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်) ကိုယ့်ရဲ့ attitude က ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းတစ်ခုလို့ တောင်…
2 months ago5579
3 months ago0226